Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno-jir ah waxaana sameeyay galmo mana ihi bikrad. Qoyskayga midaan waxaa looga tixgeliyaa ku xad gudub sharafeed. Waxaan ka cabsanayaa qoyskayga in ay midaasi oggaadan. Maxaan sameeyaa? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 13-sanno-jir ah inta lagu guda jiray safarkii aan usoo socday waddankan waxaan la safray labbo nin. Waxay igu sameeyeen waxyaabo la yaq-yaqsado. Anigu hadda miyaan ahay khaniis?
Next Next post: Aniga iyo saaxiibtayda waxaan jirnaa 17 sanno. Waxay ii sheegtay in ay gabar jeceshahay. Ma garanayo waxa aan ku dhaho. Sideen ula dhaqmaa?